iPhone တှရေဲ့ Face ID စနဈက ဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲ? Face ID က စိတျခရြရဲ့လား? |
Apple / iPad / iPhone / Knowledge
- July 18, 2020July 18, 2020 - Pyae Heinn Kyaw
အခုပွောပွပေးသှားမယျ့ အကွောငျးအရာကတော့ Face ID အလုပျလုပျပုံအကွောငျးနဲ့ Face ID ကဘယျလောကျထိ လုံခွုံစိတျခရြတယျဆိုတာပါပဲ
Apple က 2017 September Event မှာ iPhone X ကိုစတငျမိတျဆကျခဲ့ပွီး အဆိုပါ iPhone X ဟာ Face ID စနဈကို ပထမဆုံး စတငျအသုံးပွုတဲ့ iPhone ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ .. Android တှမှော လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျးမြားစှာကတညျးက Facial Unlock စနဈတှေ ပါဝငျလာခဲ့တာဖွဈပွီး Apple က 2017 ကမှ ဒီစနဈကို အသုံးပွုတယျဆိုတော့ လူတျောတျောမြားမြားက ဝိုငျးလှောငျခဲ့ကွတာကို မှတျမိကွဦးမှာပါ
ဒါပမေယျ့ Android တှရေဲ့ Facial Recognition နဲ့ Apple ရဲ့ Face ID အလုပျလုပျပုံခငျြး မတူကွသလို ဘယျလောကျလုံခွုံစိတျခရြလဲဆိုတဲ့ Security Level လဲမတူညီကွပါဘူး .. iPhone တှဟော iPhone X မတိုငျခငျက Bio-metric Authentication System အနနေဲ့ Fingerprint (Touch ID) ကိုအသုံးပွုခဲ့ပါတယျ
ဒီ Touch ID ရဲ့ လုံခွုံရေးစနဈကောငျးမှနျမှုကွောငျ့ Apple Pay လိုအရာမြိုးကို လှယျကူစှာအသုံးပွုနိုငျတာဖွဈပါတယျ .. Apple Pay ဆိုတာကတော့ မိမိ iPhone ရဲ့ Wallet ထဲမှာ Bank Card တှအေပွငျ တခွား Card တှပေါ ထညျ့သှငျးထားနိုငျတာဖွဈပွီး မိမိ iPhone နဲ့တငျ ငှပေေးခမြှေုမြိုးပွုလုပျနိုငျတာဖွဈပါတယျ
ငှပေေးခတြောအပွငျ App တှေ Download ဆှဲတာ, Safari မှာ Password တှေ Auto-fill လုပျတာ, Third-party App တှအေတှကျ Login ဝငျတာ အစရှိတဲ့ ကိစ်စပေါငျးမြားစှာကို ဒီ Touch ID နဲ့ Face ID ကနတေဆငျ့ လုပျဆောငျပေးတာဖွဈလို့ ဒီ Touch ID နဲ့ Face ID တှဟော လုံခွုံစိတျခရြဖို့ အလှနျ့အလှနျအရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စတခုပါပဲ
Face ID ဘယျလို အလုပျ,လုပျသလဲ?
Apple က Face ID ကို 3D အနအေထားနဲ့ အလုပျ,လုပျစတောဖွဈပါတယျ .. Face ID ပါတဲ့ iPhone တှမှော ထိပျက Notch အကွီးကွီးပါဝငျတာကို သတိထားမိမှာပါ .. ဒီ Notch ထဲမှာ Infrared Camera, Flood Illuminator, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor Speaker, Selfie Camera, Microphone, Dot Project ဆိုတဲ့ အစိတျအပိုငျး 8 မြိုးလောကျကို ထညျ့သှငျးမွှုပျနှံထားပွီး အဲ့ဒီ 8 မြိုးလုံးပါတဲ့ Camera စနဈကို TrueDepth Camera System လို့ချေါဝျေါပါတယျ
ဒီအစိတျအပိုငျး 8 မြိုးထဲကမှ Parts4မြိုး ပေါငျးစပျပွီး Face ID အလုပျလုပျတာဖွဈလို့ Face ID ကိုလှညျ့စားဖို့ခကျခဲပါတယျ .. ဥပမာ ဓာတျပုံပွပွီး Face ID ကိုကြျောခှသှားတာတို့, သငျ့မကျြနှာပုံစံကို ရာဘာနဲ့အတုလုပျပွီး Unlock လုပျတာမြိုးစတဲ့ Bypass တှကေို တားဆီးဖို့ Apple အနနေဲ့ Hollywood ကနာမညျကွီး Face Mask ပညာရှငျတှနေဲ့ပူးပေါငျးပွီး သူ့ရဲ့ Machine Learning စနဈကို Train ပေးခဲ့ရပါတယျ
Touch ID စနဈဟာ လူအယောကျ5သောငျးမှာ 1 ယောကျတူညီနိုငျခရြှေိပွီးတော့ Face ID စနဈက လူအယောကျ 1 သနျးမှာ 1 ယောကျသာ တူညီနိုငျခရြှေိတာပါ .. ဒါကွောငျ့လဲ Apple က Face ID စနဈကို စိတျခလြကျခသြုံးရဲတာဖွဈပွီး Face ID စနဈဖွဈလာဖို့ ဒျေါလာ ဘီလီယံနဲ့ခြီပွီး ရငျးနှီးမွှုပျနှံ သုတသေနလုပျခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ
Face ID ရဲ့အလုပျလုပျပုံ အသေးစိတျကိုဆကျပွောလိုကျရအောငျ
Face ID တခုစအလုပျလုပျပွီဆိုအရငျ အရငျဆုံး Dot Projector က လူ့မကျြလုံးကနမေမွငျနိုငျတဲ့ အစကျပေါငျ3းသောငျးကြျောနဲ့ မကျြနှာတခုလုံးနရောအနှံ့ ထိုးထားလိုကျပါတယျ .. အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ Infrared Camera က ဒီအစကျတှကေနတေဆငျ့ မကျြနှာပုံစံကို မှတျသားထားပွီး မှတျသားထားတဲ့ Data တှကေို A11, A12, 12X, 12Z, A13 စတဲ့ သကျဆိုငျရာ Chips ထဲက Neural Engine ထဲမှာရှိတဲ့ Secure Enclave ထဲကို mathematical model အနနေဲ့ သှားသိမျးဆညျးထားပါတယျ
Secure Enclave ဆိုတာ register လုပျထားတဲ့ Touch ID နဲ့ Face ID စတဲ့ Bio-metric data နဲ့ Apple Pay Data တှကေို Encrypt လုပျပွီးသိမျးပေးထားတဲ့ Hardware တခုပါပဲ .. ဒီလို Dedicated Hardware တခုထညျ့ပေးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ iOS ရဲ့ Kernel ကို exploit (hack) လုပျနိုငျခဲ့ရငျတောငျမှ User ရဲ့ Touch ID or Face ID data ကိုရမှာမဟုတျတော့ပါဘူး .. သငျ့ရဲ့ Face ID အခကျြအလကျတှဟော ဒီ Secure Enclave ထဲမှာသိမျးဆညျးထားတာဖွဈပွီး ဘယျ Server ကိုမှ ပို့ဆောငျသိမျးဆညျးထားခွငျးမရှိလို့ Face ID Unlocking Process ဟာ On-device မှာပဲ SoC က Handle လုပျပွီး Authenticate လုပျတာပါ
သငျဟာ အမှောငျထဲမှာရှိနရေငျ ဒါမှမဟုတျ ဦးထုပျ, မကျြမှနျ, မာဖလာ, မကျြကပျမှနျ အစရှိတာတှေ တပျဆငျထားရငျတောငျမှ သငျမှနျးသိရအောငျလို့ ကူညီပေးတဲ့အစိတျအပိုငျးကတော့ Flood Illuminator ပဲဖွဈပါတယျ
Photo : HelpNetSecurity
အဲ့ဒီနောကျပိုငျးမှာတော့ သငျ့မကျြနှာကနေ နစေ့ဥျပွောငျးလဲမှုမြားစှာကို Neural Engine က နစေ့ဥျ Learn လုပျနမှောပဲဖွဈပါတယျ .. ဥပမာ နှုတျခမျးမှေးတှရှေညျလာတာမြိုး, မကျြမှနျတပျလိုကျတာမြိုး, ဝကျခွံထှကျလာတာမြိုး အစရှိသဖွငျ့ပေါ့ .. ဒီ Face ID အလုပျလုပျတဲ့ Process ကွီး တခုလုံးကို Neural Network လို့ချေါဆိုပွီး Apple အနနေဲ့ Neural Network ပေါငျးမြားစှာကို ကမ်ဘာ့နရောအနှံ့မှာ စမျးသပျပွီးမှ နောကျဆုံးအဆငျပွတေဲ့ ဒီ Neural Network ကိုရှေးခယျြခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ
ဒီ Neural Network ကို Face ID မှာတငျအသုံးခတြာမဟုတျပဲ Animoji တို့လို Feature မြိုးနဲ့ပါ အပွညျ့အဝအသုံးခတြာဟာ Apple ရဲ့ ပါးနပျမှုပါပဲ .. ဒါ့အပွငျ Neural Network ကွောငျ့ Snapchat တို့လို Third Party App တှဟော Filter တှကေို တိတိကကြ ပွုလုပျပေးလာနိုငျပါတယျ
iPad တှမှောဆို Face ID ကို အတညျ့အနအေထားရော ဘေးစောငျးအနအေထားမှာပါ အသုံးပွုနိုငျပွီး Attention Aware လို Feature မြိုးကွောငျ့ သငျ့မကျြလုံးပိတျနစေဥျမှာ Unlock လုပျလို့မရတာတှေ, ဖုနျးလာလို့ Ringtone သံလာတဲ့အခါ ဖုနျးကိုကွညျ့လျိုကျရငျ အလိုအလြောကျအသံတိုးပေးသှားတာ အစရှိတဲ့ Feature တှကေို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ
Apple ဟာ iPhone တှရေဲ့ ဘေးဘောငျတှကေို ကြဥျးသထကျကြဥျးအောငျ ဒီ Face ID ကိုအသုံးပွုခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ .. ဒါပမေယျ့ Face ID မှာပါတဲ့ Components တှကွေောငျ့ Notch ကွီးကနျြနဆေဲဖွဈပွီး အနာဂတျမှာဒီ Notch ကိုလုံးဝပြောကျအောငျဖနျတီးရမှာပါ .. ဒီလောကျဆို Face ID အလုပျလုပျပုံနဲ့ Face ID ဟာဘယျလောကျလုံခွုံစိတျခရြလဲဆိုတာ သိရှိသှားလောကျပါပွီ
Ref : Apple Support
အခုပြောပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ Face ID အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းနဲ့ Face ID ကဘယ်လောက်ထိ လုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုတာပါပဲ
Apple က 2017 September Event မှာ iPhone X ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ iPhone X ဟာ Face ID စနစ်ကို ပထမဆုံး စတင်အသုံးပြုတဲ့ iPhone ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် .. Android တွေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက Facial Unlock စနစ်တွေ ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Apple က 2017 ကမှ ဒီစနစ်ကို အသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ လူတော်တော်များများက ဝိုင်းလှောင်ခဲ့ကြတာကို မှတ်မိကြဦးမှာပါ
ဒါပေမယ့် Android တွေရဲ့ Facial Recognition နဲ့ Apple ရဲ့ Face ID အလုပ်လုပ်ပုံချင်း မတူကြသလို ဘယ်လောက်လုံခြုံစိတ်ချရလဲဆိုတဲ့ Security Level လဲမတူညီကြပါဘူး .. iPhone တွေဟာ iPhone X မတိုင်ခင်က Bio-metric Authentication System အနေနဲ့ Fingerprint (Touch ID) ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်
ဒီ Touch ID ရဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ကောင်းမွန်မှုကြောင့် Apple Pay လိုအရာမျိုးကို လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် .. Apple Pay ဆိုတာကတော့ မိမိ iPhone ရဲ့ Wallet ထဲမှာ Bank Card တွေအပြင် တခြား Card တွေပါ ထည့်သွင်းထားနိုင်တာဖြစ်ပြီး မိမိ iPhone နဲ့တင် ငွေပေးချေမှုမျိုးပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်
ငွေပေးချေတာအပြင် App တွေ Download ဆွဲတာ, Safari မှာ Password တွေ Auto-fill လုပ်တာ, Third-party App တွေအတွက် Login ဝင်တာ အစရှိတဲ့ ကိစ္စပေါင်းများစွာကို ဒီ Touch ID နဲ့ Face ID ကနေတဆင့် လုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်လို့ ဒီ Touch ID နဲ့ Face ID တွေဟာ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့ အလွန့်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတခုပါပဲ
Face ID ဘယ်လို အလုပ်,လုပ်သလဲ?
Apple က Face ID ကို 3D အနေအထားနဲ့ အလုပ်,လုပ်စေတာဖြစ်ပါတယ် .. Face ID ပါတဲ့ iPhone တွေမှာ ထိပ်က Notch အကြီးကြီးပါဝင်တာကို သတိထားမိမှာပါ .. ဒီ Notch ထဲမှာ Infrared Camera, Flood Illuminator, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor Speaker, Selfie Camera, Microphone, Dot Project ဆိုတဲ့ အစိတ်အပိုင်း 8 မျိုးလောက်ကို ထည့်သွင်းမြှုပ်နှံထားပြီး အဲ့ဒီ 8 မျိုးလုံးပါတဲ့ Camera စနစ်ကို TrueDepth Camera System လို့ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်
ဒီအစိတ်အပိုင်း 8 မျိုးထဲကမှ Parts4မျိုး ပေါင်းစပ်ပြီး Face ID အလုပ်လုပ်တာဖြစ်လို့ Face ID ကိုလှည့်စားဖို့ခက်ခဲပါတယ် .. ဥပမာ ဓာတ်ပုံပြပြီး Face ID ကိုကျော်ခွသွားတာတို့, သင့်မျက်နှာပုံစံကို ရာဘာနဲ့အတုလုပ်ပြီး Unlock လုပ်တာမျိုးစတဲ့ Bypass တွေကို တားဆီးဖို့ Apple အနေနဲ့ Hollywood ကနာမည်ကြီး Face Mask ပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး သူ့ရဲ့ Machine Learning စနစ်ကို Train ပေးခဲ့ရပါတယ်
Touch ID စနစ်ဟာ လူအယောက်5သောင်းမှာ 1 ယောက်တူညီနိုင်ချေရှိပြီးတော့ Face ID စနစ်က လူအယောက် 1 သန်းမှာ 1 ယောက်သာ တူညီနိုင်ချေရှိတာပါ .. ဒါကြောင့်လဲ Apple က Face ID စနစ်ကို စိတ်ချလက်ချသုံးရဲတာဖြစ်ပြီး Face ID စနစ်ဖြစ်လာဖို့ ဒေါ်လာ ဘီလီယံနဲ့ချီပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သုတေသနလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်
Face ID ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ အသေးစိတ်ကိုဆက်ပြောလိုက်ရအောင်
Face ID တခုစအလုပ်လုပ်ပြီဆိုအရင် အရင်ဆုံး Dot Projector က လူ့မျက်လုံးကနေမမြင်နိုင်တဲ့ အစက်ပေါင်3းသောင်းကျော်နဲ့ မျက်နှာတခုလုံးနေရာအနှံ့ ထိုးထားလိုက်ပါတယ် .. အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Infrared Camera က ဒီအစက်တွေကနေတဆင့် မျက်နှာပုံစံကို မှတ်သားထားပြီး မှတ်သားထားတဲ့ Data တွေကို A11, A12, 12X, 12Z, A13 စတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Chips ထဲက Neural Engine ထဲမှာရှိတဲ့ Secure Enclave ထဲကို mathematical model အနေနဲ့ သွားသိမ်းဆည်းထားပါတယ်
Secure Enclave ဆိုတာ register လုပ်ထားတဲ့ Touch ID နဲ့ Face ID စတဲ့ Bio-metric data နဲ့ Apple Pay Data တွေကို Encrypt လုပ်ပြီးသိမ်းပေးထားတဲ့ Hardware တခုပါပဲ .. ဒီလို Dedicated Hardware တခုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် iOS ရဲ့ Kernel ကို exploit (hack) လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှ User ရဲ့ Touch ID or Face ID data ကိုရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး .. သင့်ရဲ့ Face ID အချက်အလက်တွေဟာ ဒီ Secure Enclave ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားတာဖြစ်ပြီး ဘယ် Server ကိုမှ ပို့ဆောင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိလို့ Face ID Unlocking Process ဟာ On-device မှာပဲ SoC က Handle လုပ်ပြီး Authenticate လုပ်တာပါ
သင်ဟာ အမှောင်ထဲမှာရှိနေရင် ဒါမှမဟုတ် ဦးထုပ်, မျက်မှန်, မာဖလာ, မျက်ကပ်မှန် အစရှိတာတွေ တပ်ဆင်ထားရင်တောင်မှ သင်မှန်းသိရအောင်လို့ ကူညီပေးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကတော့ Flood Illuminator ပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ သင့်မျက်နှာကနေ နေ့စဉ်ပြောင်းလဲမှုများစွာကို Neural Engine က နေ့စဉ် Learn လုပ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် .. ဥပမာ နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေရှည်လာတာမျိုး, မျက်မှန်တပ်လိုက်တာမျိုး, ဝက်ခြံထွက်လာတာမျိုး အစရှိသဖြင့်ပေါ့ .. ဒီ Face ID အလုပ်လုပ်တဲ့ Process ကြီး တခုလုံးကို Neural Network လို့ခေါ်ဆိုပြီး Apple အနေနဲ့ Neural Network ပေါင်းများစွာကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့မှာ စမ်းသပ်ပြီးမှ နောက်ဆုံးအဆင်ပြေတဲ့ ဒီ Neural Network ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဒီ Neural Network ကို Face ID မှာတင်အသုံးချတာမဟုတ်ပဲ Animoji တို့လို Feature မျိုးနဲ့ပါ အပြည့်အဝအသုံးချတာဟာ Apple ရဲ့ ပါးနပ်မှုပါပဲ .. ဒါ့အပြင် Neural Network ကြောင့် Snapchat တို့လို Third Party App တွေဟာ Filter တွေကို တိတိကျကျ ပြုလုပ်ပေးလာနိုင်ပါတယ်
iPad တွေမှာဆို Face ID ကို အတည့်အနေအထားရော ဘေးစောင်းအနေအထားမှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Attention Aware လို Feature မျိုးကြောင့် သင့်မျက်လုံးပိတ်နေစဉ်မှာ Unlock လုပ်လို့မရတာတွေ, ဖုန်းလာလို့ Ringtone သံလာတဲ့အခါ ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်ရင် အလိုအလျောက်အသံတိုးပေးသွားတာ အစရှိတဲ့ Feature တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
Apple ဟာ iPhone တွေရဲ့ ဘေးဘောင်တွေကို ကျဉ်းသထက်ကျဉ်းအောင် ဒီ Face ID ကိုအသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် Face ID မှာပါတဲ့ Components တွေကြောင့် Notch ကြီးကျန်နေဆဲဖြစ်ပြီး အနာဂတ်မှာဒီ Notch ကိုလုံးဝပျောက်အောင်ဖန်တီးရမှာပါ .. ဒီလောက်ဆို Face ID အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ Face ID ဟာဘယ်လောက်လုံခြုံစိတ်ချရလဲဆိုတာ သိရှိသွားလောက်ပါပြီ